ADY AMIN’NY TAZOMOKA :: Distrika sivy ambin'ny folo hofendrahana ody moka mahery vaika • AoRaha
ADY AMIN’NY TAZOMOKA Distrika sivy ambin’ny folo hofendrahana ody moka mahery vaika
Mitohy hatrany ny ady amin’ ny aretina tazo- moka hataon’ny minisiteran’ ny Fahasalamam-bahoaka sy ny mpiara-miombon’ antoka aminy. Distrika miisa sivy ambin’ny folono hofendrahina ody moka vaovao mahery vaika, araka ny vinavinan’ny minisitera amin’ity taona ity dia ny distrikan’Atsimondrano, Avaradrano, Ambohidratrimo, Andramasina, Manjakandriana, ny faritra Afovoan-tany ankoatra an’Antananarivo renivohitra sy ny maro hafa. Araka ny fanazavan’ny tale misahana amin’ny ady amin’ny tazomoka, ny Dr Andriamananjara Mauricette dia “ireo faritra mbola ahitana tazomoka no hofendrahana fanafody. Tany amin’ny faritra Ambohi- mahasoa ohatra dia somary niakatra kely ny tahan’ny trangana tazomoka tamin’ ny volana avrily fa tsy nisy kosa ny fahafatesana vokatr’io aretina io tany an-toerana”.
Efa nanomboka tamin’ ny herinandro lasa teo tany amin’ny disitrikan’Avaradrano ny famendrahana io fana- fody io. Mahery vaika kokoa ary maharitra fito volana ny herin’ilay fanafody raha oharina amin’ny ody moka fampiasa teo aloha. “Somary mahery fofona aloha ilay fanafody fa narahina avokoa ny torimarika nomen’ireo mpiasan’ ny fahasalamana rehetra. Tena mahafaty karazam-bibikely ato an-trano izy io”, hoy ny renim- pianakaviana iray monina etsy Ambohimangakely.
Efa foana eto an-drenivohitra
Araka ny fanazavan’ny mpitsabo hatrany dia efa voasokajy fa foana eto anivon’ ny distrikan’Antananarivo renivohitra ny aretina tazomoka ka antony tsy hamendrahana fanafody eto an-drenivohitra intsony. Na izany aza tsy mbola fongana tanteraka fa efa vitsy ny tranga hita. Raha ny fanazavan’ny mpitsabo dia raha tranga iray amin’ ny arivo notiliana ihany no voamarina fa tazo hita amina faritra iray dia azo lazaina fa efa foana amin’ ilay faritra ilay aretina.
“Efa tafiditra tao anatin’ ny faritra efa tsy dia ahitana trangana tazomoka intsony ny disitrikan’Atsimondrano ary efa farany hamendrahana fanafody amin’ity taona ity ”, hoy ihany ny Dr Andriamananjara Mauricette.
Hisy ihany koa ny fizarana lay misy ody moka amin’ ny distrika maherin’ny zato amin’ny volana aogositra sy septambra ho avy io.
TOETR’ANDRO :: Ho maina ny andro ao anatin’ny telo andro
Fahakiviana tamin’ny fitsaboana :: Ankizilahy, sivy taona, efa nanomanana fandevenana